Auto icheku ọkụ nkwụnye, Mmanụ metering unit, pistin mkpọ - AO-JUN
Mmanụ Metering Unit
Iridium, Platinum, Nnukwu Ngwongwo
SCV Valve, Mmanụ Mgbapụta Mmanụ
Module mgbanye, Ogo dị elu
Mgbapụta mmanụ, Pistons, Valve enyemaka na ndị ọzọ
Pistons WZAJ bụ àgwà OE ma nwee otu nnukwu atụmatụ OE dịka mgbanaka mgbanaka akwụ ụgwọ iji mee ka mgbanaka mgbanaka kwesịrị ekwesị na njikwa mmanụ, yana mgbasawanye njikwa na-achịkwa maka obere mkpochapu iji belata mkpọtụ injin, iyi, nsị, ma melite njikwa mmanụ. Ntọala ahụ na-agụnyekarị pistons na pistin pin.
Usoro iridium WZAJ bu ihe ntinye ohuru na ntinye ha. Ultra ezi waya center electrode na tapered ala electrode abawanye ignitability ma belata ebua quenching. Laser welded iridium tipped center electrode na iridium-platinum alloy tipped ala electrode na-akwalite anwụ ngwa ngwa na ndụ ogologo. Isi ọla kọpa na-enyere aka igbochi ọkụ na nsị. Nickel-plated shea na akpọrepu eri na-enye mgbochi njide na corrosion nchebe. Ribbed insulator na-egbochi flashover.
Ejiri mpaghara WZAJ metering n'okpuru ụkpụrụ siri ike iji hụ na ngwaahịa ọ bụla dị elu. WZAJ na-ebunye ọtụtụ valvụ ọkụ SCV, valvụ mmanụ na mmanụ ọkụ
IGI AKW COKWỌ
Emere WZAJ's ignition coils ka ọ dị mfe ịwụnye ma nwee ọla kọpa dị elu maka ngwa a kapịrị ọnụ, ihe ọkụkụ dị ala na nrụpụta ike dị elu. Ọdịdị winding pụrụ iche ga-ebelata nha na ịdị arọ na-enweghị ịchụ àjà ahụ. Emere eriri igwe ọ bụla iji kpochapụ ihe ezighi ezi ma nyekwa volta kachasị.
Wenzhou AO-JUN Auto Parts Co ,. Ltd. e guzobere na 2014 ma gbasaa azụmahịa na 2016. Ọ bụ injin na-eweta akụkụ ụgbọ ala ma gbalịsie ike inye akụkụ akpaaka dị elu maka ndị ahịa ụwa.
Mgbe afọ ole na ole nke na-aga n'ihu mmepe, AO-JUN aghọwo a emeputa na ike ọkọnọ ike. Na usoro nke ọkụ ọkụ, AO-JUN nwere ike ọ bụghị nanị na-enye ụdị ihe ọkụkụ niile na ọnụahịa kachasị asọmpi, kamakwa ị ga-enye eriri igwe ọkụ dị elu.
Nke Ka Dị Oké Ọnụ Ahịa Ka Mma?
Okwu Mmalite Banyere Ọkụ Spark
Okwu Mmalite Banyere Pistons
Hantian Industrial District, Tangxia Town, Rui'an City, Zhejiang Province, China